We.com.mm - အိမ်မှာ ခေါင်းလျှော်ရင် သတိထားရမယ့် အချက်(၆)ချက်
ဆိုင်မှာခေါင်းလျှော်တဲ့အခါကြရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေက လျှော်ပေးကြတော့ အဆင်ပြေပေမယ့်၊ အိမ်မှာ မိမိဘာသာခေါင်းလျှော်ရင် အများစုက ဆံပင်တွေကျွတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ ဆံကေသာလေးတွေကိုလည်း မြတ်နိုးကြပါတယ်။ ဒီတော့ အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတော့ .....
၁. ခေါင်းလျှော်ရည်ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ပါစေ။
အရင်ဆုံး ခေါင်းလျှော်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိသုံးမယ့် ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးကို သေချာဖတ်သင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်တိုင်းမှာ ပါ၀င်တဲ့ပစ္စည်းများ (ingredients) ကိုရေးထားတတ်ပါတယ်။ မိမိဆံပင်သားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးကို သုံးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ
-ဆံပင်ပါးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ volumizing shampoo ဆိုတာကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် shampoo ထဲမှာပါ၀င်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ sodium chloride (သို့မဟုတ်) polyethylene glycol ပါနေတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးဆိုရင်တော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဟာ ဆံပင်ကိုထူတာမှန်ပေမယ့် ကြာလာရင် ဆံပင်သားခြောက်သွေ့ပြီး ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
- wave လှိုင်းလိုကောက်သားရှိတဲ့ (သို့) ကောက်ထားတဲ့ ဆံပင်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ silicone ပါတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးနဲ့လျှော်သင့်ပါတယ်။ silicone က ဆံပင်သားကို ပွယောင်းယောင်းလေးဖြစ်စေပါတယ်။
- ပုံမှန်ဆံသားပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာခေါင်းလျှော်ရည်သုံးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုပါဘဲ..သုံးတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မှာ ammonium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate နဲ့ sodium lauryl sulfate ဓာတ်တွေများတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးဆိုရင် ရေရှည်စွဲမသုံးသင့်ပါဘူး။ သူတို့က ဆံပင်အတွက်ပြင်းတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကြာလာရင် ကြမ်းလာပြီးဆံပင်သားအစိုဓါတ်တွေ ခြောက်လာတတ်ပါတယ်။
၂. ခေါင်းလျှော်နေရင်း သင့်ရဲ့ဆံပင်တွေကို ဘီးမဖြီးပါနဲ့။ ရေစိုနေတဲ့ဆံ ပင်တွေက ဘီးနဲ့ပိုကပ်ငြိပြီး ကျွတ်တာများပါတယ်။ ဆံပင်ဖီးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ လုံးဝခြောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှသာ ဖီးသင့်ပါတယ်။
၃. ပျော့ဆေးကိုအသုံးပြုရင် ဦးရေပြားအထိ နှံအောင်မလိမ်းပဲ ဆံပင်အဖျားကိုဘဲ လိမ်းပြီး ရေပြောင်အောင်ဆေးရမယ်...။ ဆံပင်အဖျားနေရာလေးတွေကို ပိုပြီးသတိထားလိမ်းပေးသင့်တယ်။ အဖျားနေရာတွေက ပိုပြတ်ပြီး နှစ်ခွကွဲတာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
၄. ခေါင်းလျှော်ပြီးလို့ ဆံပင်သုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း သဘက်အကြမ်းတွေနဲ့ မသုတ်ပါနဲ့။ အဝတ်အချောသား နဲ့သုတ် ပါ ။( ဥပမာ- ပုဆိုး၊ ကလေးအနှီး)။ သုတ်ရင်လည်း ဖိဆွဲချပြီး သုတ်ခြင်းမျိုးက ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ခပ်ဖွဖွလေးသာ သုတ်ပေးပါ။
၅. ခေါင်းမစိုမခြောက်ဖြစ်နေချိန်မှာ ခေါင်းအားဖြည့်ဆေး ဆီတစ်မျိုးမျိုး လိမ်းပေးပါ။
ဆီလိမ်းပြီးမှ ခေါင်းကို ဘီးအကျဲနဲ့ဖြီးပေးပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးစအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သန့်နေပြီး ဖုန်တွေ မကပ်နေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီအချိန်မှာ အားဖြည့်ဆီလိမ်းပေးခြင်းက ထိရောက်စေတဲ့အတွက်ပါ။
၆. အကုန်လုံးပြီးမှ ဆံပင်ကိုသေချာအခြောက်ခံပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း အရမ်းပူတဲ့ hair dryer မျိုးကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ ပူလွန်းအားကြီးရင် ဆံသားခြောက်ပြီး အဖျားနှစ်ခွကွဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
သင်လည်းခေါင်းလျှော်တော့မယ်ဆိုရင် အခုလို နည်းလမ်းလေးတွေကို သတိထားပြီး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်...။
လက်သည်းပုံမဖော်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံးလက်သည်းပုံဖော်နည်း (၄) နည်း
အိမ်မှာသုံးနေကြဒီပစ္စည်း (၃) မျိုးနဲ့ဆို မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့ အမာရွတ်တွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်လို့ရပြီ
မိတ်ကပ် Foundation လိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အရာတွေက
မိန်းကလေးတွေကြားမှာ ပိုပိုပြီးတော့ရေပန်းစားလာတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ